भ्रष्टाचार प्राइभेट लिमिटेड
भ्रष्टाचार एक मायावी संस्था हो । सरकारी हुँदाहुँदै पनि यो प्राइभेट चरित्रको छ । सार्वजनिक हुँदाहुँदै पनि यो अत्यन्त निजी छ । भ्रष्टाचार कसैले खोजेर फेला पार्न सक्दैन, तर यसैको धड्कनको तालमा चल्ने आदत सबैलाई परिसकेको छ । दरबारदेखि घरबारसम्म म, मेरो र केवल मलाई भन्ने भावनामा यो संस्था चलेको छ । भ्रष्टाचार प्राइभेट लिमिटेडको रहस्यमय जालोभित्र घेरिएर हामी कहिले निसास्सिन्छौँ, कहिले दंग पर्छौं । यसको शक्ति अपरम्पार छ । चुनौती दिने कसले ? कोसँग छ प्रमाण ? यो संस्थाको नामोनिसान कसले देखाउन सक्छ ? भ्रष्टाचार प्रालिका अनगिन्ती कार्यालयहरूमा तपाईं पुग्नुभएको छैन त ?